Fumax dia hanangana ICT ho an'ny tabilao tsirairay hijerena ny fifandraisana sy ny asan'ny birao.
Ny ICT, fantatra amin'ny anarana hoe In-Circuit Test, dia fomba fitsapana mahazatra hijerena ireo kilema famokarana sy kileman-javatra amin'ny alàlan'ny fitsapana ny fananana elektrika sy ny fifandraisana elektrika amin'ireo singa an-tserasera. Izy io dia manamarina indrindra ireo singa tokana amin'ny tsipika sy ny boribory misokatra sy fohy an'ny tambajotra boribory tsirairay. Izy io dia manana ny mampiavaka ny toerana misy ny tsininy tsotra, haingana sy marina. Fomba fitsapana ambaratonga singa ampiasaina hizahana ny singa tsirairay amin'ny tabilao mihodina.
1. Ny fiasan'ny TIC:
Ny fanandramana an-tserasera dia matetika no fomba fitsapana voalohany amin'ny famokarana, izay afaka maneho ny toetr'andro amin'ny famokarana, izay manampy amin'ny fanatsarana sy fampiroboroboana. Ny tabilao lesoka notsapain'ny TIC, noho ny toerana misy ny lesoka marina sy ny fikojakojana mety azy, dia afaka manatsara ny fahombiazan'ny famokarana ary mampihena ny vidin'ny fikolokoloana. Noho ny entana fanandramana manokana dia iray amin'ireo fomba fitsapana manan-danja amin'ny fanomezan-toky ny kalitaon'ny famokarana maoderina.
2. Ny fahasamihafana misy eo amin'ny TIC sy AOI?
(1) Ny TIC dia miankina amin'ny toetoetran'ny herinaratra ao amin'ireo singa elektronika ao amin'ny fizaran-tany hijerena. Ny toetra ara-batana amin'ireo singa elektronika sy ny fantsom-pifandraisana dia voamariky ny fahita ankehitriny, ny herinaratra ary ny onjam-peo.
(2) AOI dia fitaovana iray izay mamantatra ireo kilema mahazatra hita amin'ny famokarana soldering mifototra amin'ny fitsipika optika. Ny sary aseho amin'ireo singa misy ny fizaran-tany dia voamarina tsara. Fitsarana fohy no tsaraina.
3. Ny tsy fitovizan'ny TIC sy FCT：
(1) Ny TIC dia fitsapana tsy miangatra indrindra, hijerena ny tsy fahombiazan'ny singa sy ny tsy fahombiazan'ny welding. Izy io dia tanterahina amin'ny dingana manaraka amin'ny welding welding. Ny tabilao misy olana (toy ny olan'ny welding mihodina sy ny faritra fohy an'ny fitaovana) dia amboarina mivantana eo amin'ny tsipika welding.
(2) fitsapana FCT, aorian'ny famatsiana herinaratra. Ho an'ny singa tokana, ny tabilao fizika, ny rafitra ary ny simika ao anatin'ny fampiasa mahazatra, zahao ny anjara asan'ny asany, toy ny herinaratra miasa ao amin'ny birao, ny herinaratra miasa, ny angovo azo tsapain-tanana, afaka mamaky sy manoratra ara-dalàna aorian'ny herinaratra, ny hafainganana aorian'ny fampandehanana ny motera, ny fanoherana ny terminal fantsona aorian'ny fampandehanana ny fampitana, sns.
Raha fintinina, ny TIC no tena mamantatra raha ampidirina tsara na tsia ireo singa mpiorina amin'ny faritra, ary ny FCT dia mamantatra raha toa ka mandeha ara-dalàna ny fizaran-tany.